Unboxing nke iPhone 7 na-ekpughe na ị ga-enwe ike ịhọrọ bọtịnụ mmalite | Esi m mac
Unboxing nke iPhone 7 na-ekpughe na ị nwere ike ịhọrọ bọtịnụ Home
Egburu | | Noticias
Echi, na nchịkọta, nkeji izizi nke iPhone 7 na iPhone 7 Plus ga - amalite ibute ndị ahịa mbụ ha. Na mgbakwunye, site na echi ọ ga-enwe ike ịzụta ha ozugbo na ụlọ ahịa, ọ bụrụ na enwere ngwaahịa zuru oke, ihe yiri ka ọ gaghị adị. O sina dị, anyị nwere ike ịhụrịrị otu n’ime mbido mbụ nke iPhone 7.
YouTuber MKBHD ewepụla abụọ nke ụdị ọhụrụ ahụ. Ọ bụ iPhone 7 na kenkowaputa ojii, na iPhone 7 Plus na matte ojii. O weputara ha n'ime igbe ha, gosiputara ihe di n'ime onye obula n'ime ha, tinyere Lightning EarPods ohuru na ihe ngbagha ahu. Ma olee otu ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ, ọ gosipụtakwara anyị usoro usoro nhazi na - ekpughe nke ahụ Anyị nwere ike ịhọrọ ụzọ bọtịnụ mmalite Ọhụrụ na-arụ ọrụ.
1 Unboxing nke iPhone 7 na-ewetara anyi obere ihe ijuanya
1.1 Nhọrọ atọ nke bọtịnụ mmalite ọhụrụ
2 Ndị fọdụrụ nke unboxing
Unboxing nke iPhone 7 na-ewetara anyi obere ihe ijuanya
Ọ bụ ihe anyị amaghị ruo oge a. Mgbe MKBHD malitere ịmalite site na usoro ntọala iOS, ọ chọpụtala usoro ọhụụ ọzọ na iPhone 7 nke na-adịghị adị. Ọ bụ nhọrọ iji họrọ nzaghachi nke mgbapụ nke bọtịnụ ụlọ ọhụrụ ga-enye onye ọrụ.
Ozugbo ị họrọla ma kwado asụsụ nke sistemụ arụmọrụ, mpaghara ebe ọ dị, ma hazie aha ID, Siri abanyela na Apple ID gị, iPhone 7 Ọ ga - eme ka ị "mara bọtịnụ mmalite ọhụụ." Site na MacRumors ha rụtụrụ aka na ha webatara nhọrọ ọhụrụ a na mbido nke iOS 10 na iPhone ọhụrụ na iPhone 7 Plus na-eme "gị iPhone ahụmahụ ọbụna ihe onwe site na ịpị pịa bụ ihe ziri ezi n'ihi na ị."
Nhọrọ atọ nke bọtịnụ mmalite ọhụrụ
Na usoro ohuru a, iPhone ga-enye anyị nhọrọ atọ nwere mmetụta dị iche iche nke nzaghachi haptic. MKBHD kọwara otu nhọrọ dị ka "oke ọkụ", ihe fọrọ nke nta ka ọ ruo ebe ọ na-ejighi n'aka ma ọ na-apị bọtịnụ ahụ ma ọ bụ na ọ pụtaghị. Nke atọ na-akọwa ya dịka "azịza siri ike", ebe nhọrọ nke abụọ ewerela ya dị ka etiti etiti etiti abụọ ndị gara aga. O kwuru na site na etiti nhọrọ "ekwentị niile ka na-ama jijiji", mana kpebiri ịga nke atọ dị oke mkpa iji jide n'aka mgbe a pịa bọtịnụ ahụ.
Ndị fọdụrụ nke unboxing
Maka ndị ọzọ, ọ dị ka ọdịnaya nke igbe ahụ na nhazi nke ọhụrụ iPhone 7 bụ, n'ọtụtụ buru ibu, ihe anyị na-ahụ kemgbe ọdịnala.
IPhone ọ bụla na-abịa na akwụkwọ ndị a na-emebu, eriri ọkụ ọkụ, ihe nkwụnye ọkụ USB na ugbu a, ihe ọhụụ Lightning EarPods na nkwụnye ọkụ na 3,5mm jack, nke bụ nnukwu ọhụụ n'afọ a.
Ha na-hụrụ ọdịiche abụọ ma e jiri ya tụnyere afọ ndị gara aga. N’otu aka, ekweisi ọhụụ anaghịzi abanye na obere igbe rọba ahụ anyị hụrụ na ụdị ndị gara aga. N'aka nke ọzọ, ugbu a iPhone apụtaghị ozugbo igbe mepere, mana akwụkwọ dị na ya. Naanị ntụgharị nke ụdị ndị gara aga.
MKBHD na-egosi na vidiyo ya unboxing nke ụdị abụọ, matte black na kenkowaputa oji. Ọ na-atụ aro matte nwa n'elu kenkowaputa, nke ọ kpọrọ "mbipụta pụrụ iche" nke nwere ike iduga ụfọdụ nkụda mmụọ na mbọ anyị na-eme ka ọ dị ọcha.
O mekwara nyocha Geekbench ngwa ngwa, na-akwado nke ahụ iPhone 7 Plus gụnyere 3GB RAM nakwa na ọ bụ otu isi.
Echi ga-enwe nnukwu mwepụta nke iPhone 7, na obi ụtọ na-eto mgbe ụfọdụ maka ọtụtụ. Apple ugbua ekwenyela na ereela iPhone 7 Plus na iPhone 7 na gloss ojii tupu mmalite nke echi ma ọ gaghị adị na ụlọ ahịa Apple. maka ndị ahịa na-eje ije.
Ndị ọrụ dị njikere ịzụta ụdị ndị ọzọ amalitelarị kwụ n'ahịrị n'ihu ụlọ ahịa Apple.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Unboxing nke iPhone 7 na-ekpughe na ị nwere ike ịhọrọ bọtịnụ Home
Xcode na Swift 3 ka emelitere site na nkwado maka iOS 10
Apple na-ajụ ndị ọrụ MacBook Pro Retina ma ọ bụrụ na ha ejiri nkpu isi okwu